Unodoli weSini wesiNtu othembekileyo oQhelekileyo umthengisi waBucala 
Unodoli weSiko oSiko
Oonodoli bezesondo abaphezulu benzelwe wena 
Oonodoli besini esiko bayeza
Iindaba ezimnandi, oonodoli besini besiko ziyeza,Ivenkile ye-urdolls ngoku yamkela oonodoli besini besiko-.
Unodoli wokwenyani olungiselelwe wena
Ngaba ukhathazwa kukungakwazi ukukhetha okungcono unodoli wesondo ngenxa yokungabi naxesha? Ngaba uthengisa kwiindawo ezininzi zoonodoli bezesondo kwaye awukwazi ukufumana lowo uvuyayo naye? Ngokwempendulo yokwenyani yabathengi abaninzi be-urdolls yile. Ke ngoko, ukwenza kube lula kubo bonke unodoli wesini lover ukuthenga abazithandayo Oonodoli Real, sidale umntu phezulu unodoli wesiko iphepha ukuze ukwazi ukuthenga ngokulula owuthandayo Uthando Doll.
Ikwisitokhwe + iLyric 150CM Iyeza kungekudala i-E-Cup yoBomi bokwenyani bothando unodoli okumgangatho ophezulu SE SED103-US TPE
Ikwisitokhwe + iKate 150CM entsha ye-E-Cup yoBomi bokwenyani bothando unodoli oshushu SE Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwe-TPE
Ikwisitokhwe + iStevie 150CM iThengisa kakhulu i-E-Cup yoBomi bokwenene unodoli wothando EVO SE SED062-US TPE
Kwi-Stock + Maisie 150CM SED063-US E-Cup yoBomi bokwenyani UDoli wothando Ukukhululwa kwangoko SE TPE Entsha
Indlela yokwenza unodoli wakho othandekayo wesini?
Inkqubo kaNodoli ngokweSini eyenzelwe wena
Ungasinika umfanekiso wakho owunqwenelayo wonodoli wothando, ubude, umgca wamabele, umgca weSinqe, umgca weHip, ubude bengalo, ubude bomlenze, ububanzi begxalaba, i-Thighline, ubungakanani beenyawo, ubunzima, imathiriyeli, njl.
①Umfanekiso + ndifuna umzimba wakhe kwi-silicone + Ukuphakama: 162cm
②Umgca wamabele: 90.5cm
③Ubude besinqe: 72cm
④Umgca weHip: 95cm
⑤Ingalo ubude: 57cm
⑥Ubude bomlenze: 71cm
⑦Ububanzi bamagxa: 43cm
⑨Ubungakanani beenyawo: 25cm
Unokukhetha umzimba wakho owuthandayo kunye nokumila kobuso kwiphepha lethu lonodoli lothando. Ukongeza, unokukhetha ithoni yesikhumba, umbala wamehlo, umbala wezikhonkwane, i-hairstyle kunye nokumila kwesini. Sisebenza ngeempawu ezininzi kwaye sinikezela zonke iinketho ezifana Unodoli weIrontech, Iidola zeWM kwaye I-SE Doll ukubalula ezimbalwa. Siyathemba ukuba ungalifumana iqabane lakho olithandayo likanodoli wesondo apha.
Ukongeza, ukuba ungumphembeleli omkhulu okanye ibhlogi enokuhamba okukhulu kwabalandeli, kwaye ufuna ukufumana izipho ezigqwesileyo zoonodoli besini okanye imali enikezwe yiwebhusayithi yethu, nceda uqhagamshelane nathi ngebhokisi yeposi esemthethweni (ecetyiswayo), Facebook okanye Twitter, ndijonge phambili ekudibaniseni kwakho.
①I-imeyile yenkonzo yabathengi esemthethweni ye-urdolls (ekhethwayo):